यी विवाहित अभिनेतासँग थियो प्रियंकाको ‘अफेयर्स’ – SaipalNews.com
असीमसँग सम्बन्ध टुटेकी प्रियंकाको अक्षय कुमारसँग नाम जोडियो । एकसाथ फिल्ममा देखिन थालेपछि उनीहरुको प्रेमको चर्चा निकै चल्यो । उनीहरु निकै नजिक भए । जसको परिणामस्वरुप निकै बोल्ड फोटोशुट समेत गराएका थिए । तर, उनीहरुको प्रेमको बीचमा अक्षयकी श्रीमती ट्विङ्कल खन्ना आइन् । उनले प्रियंकाको साथमा फिल्म खेल्न समेत बन्देज लगाइन् । त्यसपछि अक्षयले प्रियंकासँग दुरी कायम गरे ।
त्यसपछि, प्रियंकाको पुनः हरमन बावेजासँग नाम जोडियो । उनीहरुले एकसाथ फिल्म समेत खेले तर फिल्म फ्लप भयो । यसका साथै, प्रियंकाको नाम शाहरुख खान, जेरार्ड बटलर र शाहिद कपूरसँग पनि जोडियो । तर, यी अभिनेताहरुसँग उनको अफेयर चलेको हल्ला मात्रै हो वा वास्तवमै सम्बन्धमा रहेका थिए त्यो भने कसैले खुलेर बताएनन् ।
मुना कार्की हत्या जटिल बन्दै ! प्रहरीले लियो मुना र विजयको मोबाइल
एमसीसीबारे नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनमा के थियो ? पूर्ण पाठ
थप एक हप्ता लम्बियो लकडाउन
नयाँ दिल्लीमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले आज ककस्लाई भेट्दैछन् ?
ओलीले बोलाए केन्द्रीय कमिटी बैठक, बालुवाटारमा रणनीतिक छलफल